Indlela yokukhetha i-swimsuit yamantombazane anezimo - Imfashini 2022
Indlela yokukhetha i-swimsuit yamantombazane anezimo
Ngeziqu zokubhukuda eziphakeme
Izingubo zokubhukuda ezinemigqa eqinile
Noma yimuphi umfanekiso ungavezwa ekukhanyeni okuhle kakhulu ogwini. Into esemqoka ukukhetha hhayi nje i-swimsuit yemfashini, kodwa futhi ezosiza ukufihla amaphutha futhi igcizelele izinzuzo.
Amantombazane amaningi akhuluphele ashiya unomphela izingubo zokubhukuda ezihlukene. Kodwa imodeli ye-retro eneziqu zokubhukuda eziphakeme kanye ne-top evaliwe kahle, ebilokhu ijwayele amasizini ambalwa edlule, akufanele neze ibhalwe phansi. Kuyi-swimsuit enjalo ezokuvumela ukuthi uqinise isisu sakho futhi wenze ukhalo lwakho lubonakale luncane.
Ukukhetha imodeli ye-swimsuit yocezu olulodwa, kungcono ukugxila ekukhetheni okwenziwe ngezinto eziminyene ezimodela isibalo njengokwenza izingubo zangaphansi. Ngendlela, i-strip nayo yenza umsebenzi omuhle kakhulu wokudala inkohliso yesibalo esincane.
Izintambo ze-asymmetric kanye nemigqa yilokho okudingayo ukuze udale umphumela obonakalayo wesibalo esiphelele kakhulu. Ngakho-ke, kufanelekile ukunaka amamodeli avaliwe we-swimsuits anokufakwa okusobala, njengasesithombeni.
Ku-swimsuit enezisike ezijulile ezinhlangothini noma indawo encane yendwangu esiswini, ungase uzizwe sengathi usebhikini evamile, ngoba ivuleke ngokwanele. Kodwa ngasikhathi sinye, isitayela sikuvumela ukuthi ubukeke ulungise umumo, ugcizelela kahle ukugoba.
Indlela yokukhipha izindlebe emathangeni: isethi ephumelelayo yokuzivocavoca
Izindlebe emathangeni … Ungawaqeda kanjani. Le nkinga kumele isingathwe ngendlela ebanzi, lena ukuphela kwendlela yokuzuza impumelelo ebonakalayo. Sabelana ngesethi ephumelelayo yokuzivocavoca ezosiza ukuqeda izindlebe emathangeni